တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
မေ ၇၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ၊ မေ ၇
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ် တက်ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ သံရုံးမှပထမအတွင်းဝန် Mr. Naoya KISHI တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပညာရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေအမှန်ကို သိရှိလေ့လာသုံးသပ်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းသောဒေသများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော ၊ မေ ၇
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ သညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျ တကျရောကျပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ သံရုံးမှပထမအတှငျးဝနျ Mr. Naoya KISHI တို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ပညာရညျမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြား၊ ပွညျပနိုငျငံမြားအနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ အရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ အခွအေနအေမှနျကို သိရှိလလေ့ာသုံးသပျပွီး တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ဆကျလကျဆောငျရှကျသငျ့သညျ့ကိစ်စရပျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့ကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြားနှငျ့ ငွိမျးခမျြးသောဒသေမြားတှငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ပူးတွဲငြိမ်းချမ်းရေး ရံပုံငွေအဖွဲ့( JPF )အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့် အထည် စက်ရုံ(သမိုင်း)သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဩဂုတျ ၂၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0